RW Khayre oo Xafiiskiisa ku Qaabilay Madaxa Haweenka Qaramada Midoobay ee Soomaaliya – Puntland Post
Posted on August 15, 2018 August 15, 2018 by PP-Muqdisho
Muqdisho (PP) ─ Ra’iisul Wasaaraha Somalia, Xasan Cali Khayre ayaa kulan la qaatay Madaxa Haweenka Qaramada Midoobay u qaabishan Soomaaliya, Faadumo Dayib oo hordhac u ah wafdi ay hoggaaminayso agaasimaha arrimaha haweenka ee Qaramada Midoobay, Phumzile Mlambo-Ngcuka, oo Soomaaliya booqasho ku imaanaysa maalmaha soo socda.
“Waxaan Ra’iisul Wasaaraha u soo booqday inaan xoojinno wada-shaqeynta ka dhaxaysa Dawladda Somalia iyo Xafiiska haweenka ee QM. Aad ayaanan ugu faraxsanahay sida uu noo soo dhaweeyay uuna noogu dhiirri-geliyay shaqada haweenka ee Qaramada Midoobay,” ayay tiri Faadumo Dayib kulank kaddib.
Sidoo kale, Faadumo Dayib ayaa waxay ka mid ahayd musharraxiintii isku soo taagay xilka madaxweynaha Somalia, inkastoo xilli dambe sheegtay in ay ka baxday tartanka maadaama ay bateen musharraxiinta xilkan isku soo taagay.
Dhanka kale, Ra’iisul Wasaare Khayre ayaa sidoo kale kala hadlay sidii codka dumarka Soomaaliyeed iyo ka qayb-galkooda siyaasadda loo xoojin lahaa, isagoo ku dhiirri-geliyay in ay sii laba jibbaaraan hawsha lagu horumarinayo dawrka haweenka Soomaaliyeed ay ku leeyihiin dawladnimada.
Ugu dambeyn, Booqashada la filayo inay agaasimaha arrimaha haweenka ee Qaramada Midoobay ku timaaddo magaalada Muqdisho ayaa waxay qayb ka noqonaysaa tallaabooyinka ay beesha caalamku ku dhiirri-gelinayso Somalia oo ka kabanaysa sannado badan oo colaado ah.